Shirkadda guryaha Poseiden oo qoys soomaaliyeed si xun ula dhaqantay | Somaliska
Magaaladda Göteborg, waxaa dhibaato ku heeysta qoys soomaaliyeed oo degan mid ka mid ah shirkadaha guryaha kireeya magaaladda Göteborg ee Poseiden la yiraahdo.
Qoyskan oo muddo afar sanno ah degan qolal ku yaala dhulka hoostiisa ee källare-ha loo yaqaano, ayaa waxaa ku heeysta dhibaato caafimaad darro ah ka dib markii qeybo ka mid ah gidaarada ama derbiyada guriga ay dhaawacyo soo gaaren. Xaaladda deegaan ahaan ee guriga oo aad u liito ayaa keenay caafimaad darro soo wajahda carruuraha qoyskaasi soomaaliyeed.
Aabe Cabdilaahi iyo hooyo Bilan ayaa sheegay in markii ay ku wargeliyeen gidaarada ja jabay islamarkaasina soo deeyanayo biyo lugu booriyey ineey maryo ku tir tiraan. Hooyo Bilan waxaa ay sheetay in carruuta ay dhashay uu kaga dhacay cudurka neefta (asma-da). Mid ka mid ah carruurtaasi oo sadex bilood jira ayaa waxaa horey u qabay xanuun xagga wadnaha ah, dhaqaatiir-tana sheegeen in xaaladda deegaan ahaan ee guriga sababi karo in uu qaado infekshin.
Ma ahan dhaqaatiir-ta caafimaadka waxa ka deeyrinaya xaaladda guri ee familkaasi sidaasi si lamid ah waxaa ay qeylo dhaan ka soo yeertay iskuulka ay carruurtu dhigtaan kuwaas oo ku booriyey in shirkadda ay wax ka qabato xaaladda liidata ee reerku kala kulmeen guriga ay degan yihiin.
Bilan oo ah hooyadda dhashay toddobbo carruur ah ayaa waxeey walaac ka muujisay xaaladdan oo ay tilmaantay ineey tahay mid eeysan u laheyn dulqaad islamarkaasina dareemayaan in ay ku jiraan xabsi, casbina ka qabta in wiilkeeda yarkaa u la soo deristo xaalad halis ah.
Ugu dambeyntiina shirkadda Poseidon ayaa sheegtay in xaaldda reerka ku sugan yahay aan la aqbali karin. Jan Jentzell oo wakiil ka ah degmadda Kortedala ee ay shirkadu ku leedahay xarrumo ayaa wargeyska GT u sheegay in la xalinayo, balse cabashooyinkii hore ee reerka aanu isagu soo gaarin tahayna markii ugu horeeysay ee ay cabasho noocani ahi soo gaarto. Wuxuu sheegay inuusan haatan ka jawaabi karin sababta la iskaga indho tiray qeylo dhaaqantii dhaqaatiirta iyo cadeymihii ay soo direen.
Shabakadda Somaliska.com oo xirriir la sameeysay aabahan soomaaliyeed ayaa ku howlan wareysi ay la yeelaneeyso, waxaana ay dhawaan idiin soo gudbin doontaa warbixin maqal iyo muuqaal leh.
Dowlada oo ku dhawaaqday isbedalo lagu samaynayo nidaamka isdhexgalka